Tun Tun's Photo Diary: Langkawi Trip, Underwater World #2
Langkawi Trip, Underwater World #2
14-Aug-2012, Langkawi ကိုရောက်တဲ့ ပထမဆုံးနေ.ရဲ. ညနေပိုင်းကို Underwater World နဲ. Black Sand Beach ကိုသွားဖို. ဟိုတယ်ကနေ ကားငှားခဲ့တယ်။ အဲ့တော့ အရင်ဆုံး Underwater World ကို အရင်သွားတယ်။ Underwater World က တည်းတဲ့ ဟိုတယ် ကနေ သိပ်ပြီး မဝေးဘူး။ လမ်းလျှောက်လို.ရတဲ့ အနေအထားမှာရှိတယ်။ အဲဘက်မှာ ဆိုင်တွေလဲပေါတယ်။ Fast food၊ shopping၊Duty Free စတဲ့ ဆိုင်တွေရှိတယ်။
အဲ့တုန်းက ငါးပြတိုက် ၀င်ကြေးက တစ်ယောက်ကို RM35 လောက်ပေးရတယ်။ အခုတော့ RM40 ဖြစ်သွားပြီတဲ့။ ၀င်ဝင်ချင်း ငါးတွေ မတွေ.ရသေးခင် အခုလို ကြက်တွေ ငှက်တွေကို တွေ.ရတယ်။ ငှက်တွေ Indoor ထဲမှာနေရတော့ ပျော်မှ ပျော်ပါ့မလားလို. စဉ်းစားမိတယ်။
စင်ကာပူနဲ. ဘန်ကောက်က ငါးပြတိုက်တွေ ရောက်ဖူးတော့ ငါးပြတိုက်တွေသွားရတာ ကိုယ့်အတွက် သိပ်ပြီးတော့ အထူးအဆန်းမဟုတ်ဘူး။ ဒီငါးပြတိုက်လည်း မဆိုးပါဘူး။ ၀င်ကြေးက သိပ်ဈေးမကြီးပဲ အကောင်တွေ အစုံကြည့်ရတယ်။
I like his hair style.
အထဲမှာ နည်းနည်းမှောင်တယ်။ ကင်မရာကလည်း မကောင်းတော့ ပုံတွေမကောင်းဘူး။ နောက်ပြီးတော့ Black Sand Beach မှာ Sunset မမှီမှာ ဆိုးလို. ပြတိုက်ထဲမှာ သိပ်ပြီး အချိန်မဆွဲပဲ အမြန်လျှောက်ကြည့်ပြီး ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ အချိန်ရရင်တော့ ပြတိုက်ထဲမှာ ဇိမ်ပြေနပြေ ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်တာပေါ့။
Those live sharks look like toy. But they are real Sharks. ;)
Looks so fierce.
ငါးပြတိုက်ထဲမှာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ ပုံတွေကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ ဒါပြီးတော့ Black Sand Beach ကို သွားမှာပါ။ Black Sand Beach ကို ငါးပြတိုက်ကနေ မိနစ်၃၀လောက် ကားမောင်းရတယ်လို. ပြောတယ်။ နောက်ပို.စ်မှာ ဆက်ရေးပါ့မယ်။
at 3/25/2015 07:35:00 PM
Labels: Animal, Langkawi, Malaysia, Zoo
Remembering Lee Kuan Yew (1923 - 2015)
Langkawi Trip, Arrival #1